कस्तो अच्चम ! जिग्री ,पाँडे ,कक्रोज ,बले र रक्षा बिनाको भद्रगोल लाइकभन्दा डिस्लाइक धेरै , दर्शक भन्छन अब भद्रगोल हेर्दैनौ ! – Life Nepali
कस्तो अच्चम ! जिग्री ,पाँडे ,कक्रोज ,बले र रक्षा बिनाको भद्रगोल लाइकभन्दा डिस्लाइक धेरै , दर्शक भन्छन अब भद्रगोल हेर्दैनौ !
Previous ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’मा च”ल्यो रु”वाबा”सी ( भिडियो हेर्नुहोस् )
Next कृष्ण ओलीले राखे दुवै हात र खुट्टा, कृ*तिम हातले लेखे पहिलो अक्षर (भिडियो सहित)